Na inon-kidona, na inon-kihatra, isisihan’i Alpha Condé ny tsy maintsy hahazoana fepotoam-piasàna fanintelony · Global Voices teny Malagasy
Nihoatra tamin'ny isan'ny mpifidy ao aminy ny an'ireo kaominina sasany
Voadika ny 30 Desambra 2020 3:02 GMT
Mpitandro filaminana nandritra ny hetsika iray nataon'ny mpanohitra gineàna avy amin'ny Mandatehezana ho Fiarovana ny Lalampanorenana. Sary an'i Aboubacarkhoraa, nalaina tao amin'ny Wikimedia ary nampiasàna ny lisansa CC BY-SA 4.0
Ny 15 Desambra, nanao fianianana ho an'ny fepotoam-pitondrany fanintelony ny filoha gineàna Alpha Condé taorian'ny fandresena azony tamin'ny fifidianana izay ho filohampirenena natao tamin'ny 18 Oktôbra ary nahazoany alàlana taorian'ny fitsapankevibahoaka iray natao tamin'ny 22 Martsa 2020, niaraka tamin'ireo fifidianana ny ho solombavambahoaka. Efa teo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 2010 ary tokony efa niala tamin'ny fitondrana i Alpha Condé ny taona 2020 raha ny voalazan'ny lalampanorenana gineàna izay tsy manome alàlana afa-tsy fepotoam-piasàna dimy taona roa misesy ihany ho an'ny tsirairay. Na izany aza, vao tonga ny lohataona 2019, nampahafantatra izy fa mety hanova lalampanorenana amin'ny fampanaovana fitsapankevibahoaka mba hahazoana fepotoam-piasana fanintelony indray.
Nanomboka tamin'ny 2019, niasa fatratra ho amin'io tokoa izy tamin'ny filalaovana ny rafitra pôlitika ka tsy nisalasala nanao hosoka tamin'ny dingam-pifidianana mba hahatratrarany ny tanjony. Nitoroka ireny tsy fanjariana gaovana ireny ireo fikambanana iraisampirenena, ary hatramin'ny fiarahamonim-pirenena sivily gineàna, saingy tsy nisy vokany satria mbola vitany ihany ny nampandany azy indray.
Nandritra ny fifidianana izay ho solombavambahoaka natao tamin'ny 2018, nandefa iraka roa tany Ginea ny Organisation internationale de la francophonie (OIF), mba hanampy io firenena io tamin'ny fizotry ny fifidianana, ary nahamarika tsy fahatomombanana goavana, ary dia nisintaka tamin'ny dingana fanarahamaso. Ao anaty tenimita iray tamin'ny 24 Febroary 2020, manamarika ny OIF fa na teo aza ireo fanamarihana nataon'ny mpitsirika tamin'ny 2018, mbola nahitàna “mpifidy miisa 2 490 664 niteraka olana ihany” tao anatin'ireo taratasy momba ny fifidianana, mpifidy izay tsy nanavao ny fisoratany tamin'ny 2019 teny anoloan'ny Kaomisiôna misahana ny fandrafetana sy fanitsiana ny lisitry ny mpifidy (CAERLE) kanefa dia mbola hita foana ao anatin'ireo taratasy momba ny fifidianana:
Ny fahabangana tsikaritra tao anatin'ireny tarehimarika ireny dia nahitàna betsaka indrindra ny momba ireo mpifidy efa nodimandry, tsy voasoratra anarana ary hatramin'ny anarana miverina. Rehefa atambatra, 98% amin'ireo mpifidy 4 490 664 no tsy manana antontan-taratasy ahafahana mamantatra azy, na dia karazana 6 aza ny taratasy voalazan'ny lalàna fa azo anamarinana ny mombamomba sy ny taonan'ny mpifidy.
Tsy ny OIF irery no nahatsikaritra tsy fetezan-javatra: ny Fiombonamben'ireo firenena ao Afrika Andrefana (CEDEAO), izay fantatra ihany koa fa mankasitraka ny fitondrana amperinasa, dia nisintaka koa tamin'ny zotram-pifidianana gineàna, narahan'ny Firaisambe Afrikana.
Nobodoin'ny fiarahamonimpirenena gineàna
Noho ny fisian-javatra hafahafa, naloan'ny ampahany tamin'ny Kaomisiôna tsy miankina misahana ny fifidianana (CENI) ao Ginea ihany koa ilay fitsapankevibahoaka natao tamin'ny Martsa 2020, ka notsipihany tamin'izany ireo tsy fahatomombanana tao anatin'ny lisitry ny mpifidy.
Araka izany, toy ny fanazavan'ireo mpanao gazety roa avy ao amin'ny guineematin.com, tany amin'ireo faritra rehetra mpanara-dia ny antoko eo amin'ny fitondrana, ny Rassemblement du peuple de Guinée (RPG)-Arc-en-ciel, dia nahitàna tsy fahatombombanana goavana tamin’ny isan'ireo mpifidy voasoratra anarana:
Fitomboana mihoatra ny 54% teo anelanelan'ny 2015 sy 2019 no nomen'ireo namorona io lisitra io ho an'ireo mponina mpifidy ao Kankan fotsiny [ny tanàna faharoa ao amin'ny firenena]. Ho an'ny firenena manontolo dia 30% io fitomboana io.
Tena ratsy, tsikaritry ny sasany tamin'ireo kaominina ao amin'ny firenena fa nitombo avo roa heny ny isan'ny mponina afaka mifidy tao aminy tao anatin'ny 4 taona.
Mbola tena ratsy koa, lasa nihoatra noho ny isan'ny mponina afaka mifidy ao aminy ny an'ny sasany amin'ireo kaominina : Mandiana Afovoany (mpifidy = 133.75% amin'ny mponina), Doko (Siguiri) : 104.78%, Kouriah (Coyah : 102.07%).
Baiko tokana ny an'i Alpha Condé : mifikitra amin'ny fitondrana amin'ny fomba rehetra
Noho ny tsindry avy eny an'arabe, neken'i Condé ny hangataka amin'ny CENI mba hamerina hijery ny lisitry ny mpifidy mialoha ny fitsapankevibahoaka, no sady mandà ihany ny hilefitra manoloana ny fitakian'ireo mpiaradia aminy ao amin'ny CEDEAO mba tsy hisisika haka fepotoam-pitondrana fanintelony intsony.
Araka izany, ny isan'ireo mpifidy dia tafaverina ho 5.325.137 raha 7 764 130 teo aloha. Taorian'io fihenana io, vitan'ny Firaisambe Afrikàna sy ny CEDEAO ny niverina nitondra fanohanana ny fifidianana tao Ginea tamin'ny faran'ny Febroary, rehefa noheveriny ho ampy ireny fanitsiana natao tamin'ny lisi-pifidianana ireny.
Ao Ginea, nandà tsy handray anjara tamin'ilay fitsapankevibahoaka anefa ny mpanohitra sy ny fiarahamonina sivily mivondrona ao anatin'ny Mandatehezana ho Fiarovana ny Lalampanorenana (FNDC), ary nampitombo ireo hetsipanoherana. Herisetra no navalin'ny fitondrana izany tamin'ny fanapariahana ireo mpitandro filaminana. Ny 12 Oktôbra, nampahafantarin'ny FNDC fa tao anatin'ny taona iray, tafakatra 90 ny isan'ireo niharamboina.
Naboraky ny Amnesty International (AI) tao anaty tatitra iray tany ampiandohan'ity taona ity fa teo anelanelan'ny Oktôbra 2019 sy ny Febroary 2020:
10 raha kely indrindra ireo fihetsiketsehana noraràn'ny manampahefana, fanitsakitsahana ny zo hanana fahalalahana hanao fihaonana am-pilaminana. Olona efapolo any ho any no tratry ny fitànana am-ponja miafina, any anaty tobin-tafika ao Soronkoni, ao amin'ny faritra Kankan.
Vakio ihany koa: Nahazo alàlana hitifitra raha vao mahita ireo miaramila gineàna
Ao Conakry renivohitra, na ny fitanjozoran'ny mpandevina aza dia petahan'ny mpitandro filaminana ihany koa, hoy ny AI:
Ny 4 Novambra , efatra raha kely ireo olona maty voatifitra tao Conakry nandritra ny filaharana handeha handevina, nokarakaraina hanomezana voninahitra an'ireo olona 11 maty nandritra ireo hetsipanoherana tamin'ny volana lasa. Ny 14 sy 15 Novambra, efatra raha kely ny olona maty nandritra ny hetsipanoherana iray naparitaky ny mpitandro filaminana. Ny 21 Novambra no maty noho ny ratra nahazo azy ny olona fahadimy.
91,59% tamin'ireo vato 2.856.675 nanan-kery tamin'ireo mpifidy niisa 5.325.137 neken'ny CENI no nandàny ny lalampanorenana vaovao, nandritra ilay fitsapankevibahoaka tamin'ny 22 Martsa. Nandritra io fifidianana io, niantso ireo rehetra mpikatroka ao aminy ny mpanohitra mba hanakana ny fanaovana azy io, tamin'ny fanamarihana fisiana tsy fahatomombanana maro hafa toy ny fanovàna ny votoatin'ny lalàna nankatoavina.
Fandresena ho an'i Condé
Ny niafarany dia natao tamin'ny 18 Oktôbra 2020 ihany ny fifidinana izay ho filohampirenena, ka 12 no fitambaran'ireo mpifaninana, izay marobe no minisitra taloha nivoaka avy tao amin'ny governemantan'ny filoha nitondra farany.
Ny kandidà roa nisongadina dia ny filoha Alpha Condé sy Cellou Dalein Diallo, filohan'ny mpanohitra, mpitarika ny Fikambanan'ny Hery Demaokratika ao Ginea (UFDG) ary avy amin'ny foko “peul” monina ao avaratry ny firenena izay manome ny ampahatelon'ny mponina. Tsy nisalasalan'i Condé ny nampiasa ny fanondroana ny foko niavian'i Diallo ho entina manaratsy azy. Tao amin'ny faritr'i Kankan, nosakanan'ireo mpikatroka mpiaradia amin'i Condé tsy hanao fampilelezankevitra i Diallo.. Norobain-dry zareo ireo toerampivarotana an'ny Peuls hitany tao an-tanàna ary novonoin-dry zareo ny ombin'ireo mpiompy avy amin'io foko io tao amin'ny soba-prefektioran'i Koumban.
Ny vokany, raha ny vokatra ofisialy dia nandresy tamin'ny fifidianana i Condé ary azony tamin'ny 60% latsaka kely tamin'ireo vato manankery ny fepotoam-pitondrana fanintelony, raha 33% kosa no azon'i Diallo, ilay mpifaninana mivantana taminy. Hatramin'ny andro nanaovana ny fifidianana, ireo mpitandro filaminana no nameno ireo biraon'ny UFDG, tsy nisy anefa na kely aza fanenjehana ara-pitsarana natao azy.
Toy ny fitanisàn'i Elhadj Ousmane Baldé azy araka ilay lahatsoratry ny mpanao gazety Pathé BAH, ho an'ny VisionGuinee.Info, mitohy ny fanamparam-pahefana:
’Miditra an-kery any an-tokantranon'olona ny mpitandro filaminana, mamotika toeram-pivarotana, manjera vilany, manimba fiara sy môtô, fahitalavitra, manapitsoka armoara, manolana vehivavy sy ankizivavy, mangalatra firavaka sy vola, solosaina, telefaona, akanjo, vary, siramamy sy menaka’’ El Hadj Baldé nomena anaram-bosotra hoe “Ilay ambonin'ny lalàna” no Filohan'ny Fandrindràna nasiônalin'ireo “fulbés” [dika ho an'ny peuls] sy ny “haali pular” [dika ho an'ireo mampiasa ny fiteny peul] ao Ginea (CNFHPG).
Tamin'ny kabariny i Condé dia nanasa ireo mpiray tanindrazana aminy “hanadino ny lasa” ka hibanjina “hoavy iray misy firaisankina sy fanantenana”. Saingy ao anatin'ny toedraharaha misy amin'izao fotoana izao, toa sarotra ho tanterahana ny faniriana tahaka izany: mbola maro ireo mpanohitra no any am-ponja ary namoy ny ainy ny mpiaramiasa iray amin'i Diallo; toy ny nanamarihan'i Souleymane Souza Konaté, mpikambana iray avy amin'ny UFDG:
Voafonja ho fitsinjovana ny filaminana, fonja malazan'ny fitondràna amin'izao fotoana, maty i Roger Bamba ilay mpikatroka sady gadra noho ny pôlitika .
Antsoinay izao tontolo izao hitazona an'ireo Gineàna mpitarika ho tomponandraikitra amin'ny famonoana olona nogadraina noho ny pôlitika.
Mandria am-piadanana dadatoa malala ! @Cellou_UFDG
27 Jolay 2020Liberia